အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ… – PVTV Myanmar
·9months ago ·31 Comments
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်း၏ နှစ်သစ်ကူးမိန့်ခွန်း
မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၈၃ ခု၊ တန်ခူးလဆန်း (၆) ရက်၊ မြန်မာနှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့။
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်းခိုင်သန်းက
ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော နိင်ငံသူနိုင်ငံသား သွေးချင်းညီအစ်ကိုမောင်နှမများနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် ရောက်ရှိနေသော သွေးချင်းများအားလုံး မြန်မာ့နှစ်သစ်အခါသာမယမှာ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း
ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပြီး လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ဝပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သအပ်ပါတယ်။
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအခါသမယမှာ ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့ (National Unity Government- NUG) ကိုယ်စား နှုတ်ခွန်းဆက်သခွင့်ရတဲ့အတွက် များစွာ ဂုဏ်ယူ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတော်လှန်ရင်း ကျဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ သူရဲကောင်းများနှင့် ကျန်ရစ်သူမိသားစု၀င်များ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသူများ၊ မတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရပြီး ညဉ်းပန်း နှိပ်စက်ခံကြရသူများ၊ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ ပြင်းပြသောစိတ်ဆန္ဒနှင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီး စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန်နေကြတဲ့ လူငယ်မျိုးဆက်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ပြည်သူပြည်သားများ အားလုံးကို ဒီနေရာကနေ ဦးညွှတ်အလေးပြုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မတိုင်မီက ချမ်းသာကြွယ်၀ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများရဲ့ အတုယူအားကျစရာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံများ စာရင်း၀င် နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဟာလည်း ဆိတ်သုန်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအခြေအနေကို လိုလားမှု မရှိကြတဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ များဟာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြပေမယ့်လည်း စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အတွက် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပိုမိုရရှိပြီး ၎င်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲ အတည်ပြုနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ပြည်သူများ သေကြေပျက်စီးပြီး အတိဒုက္ခရောက်နေခဲ့ရသည်ကို အလေးအနက် မထားဘဲ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကို အတင်းအကြပ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခြေခံဥပဒေကို အခြေခံကာ စစ်ဗိုလ်ချုပ် ကြီးများကို အရပ်၀တ်လဲစေပြီး အရပ်သား အစိုးရအသွင်ပြောင်းလဲ အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို အသွင်ပြောင်း အုပ်ချုပ်စေမှုအား မနှစ်မြို့ကြတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ၎င်းတို့လိုလားသူများကို မဲပေး ရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်သူ့အစိုးရဟာ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ အခြေခံ အဆာက်အအုံများဖြစ်တဲ့ လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်တိုးတက်လာခဲ့ပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေ လွယ်ကူလာသလို လျှပ်စစ်မီးဟာလည်း ကျေးလက်ဒေသများအထိ ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံ့စီးပွားရေးဟာလည်း အထိုက်အလျှောက် တိုးတက်လာခဲ့သလို ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်ရေး၊ ၂၀၀၈ခုနှစ် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးတို့ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား သွေးချင်းညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျား…
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နို၀င်ဘာလ ၈ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေး ရေချိန် ပြည့်၀မြင့်မားနေတဲ့ ပြည်သူပြည်သားများဟာ ပြည့်သူ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များကိုသာ ဆက်လက် တစ်ခဲနက် မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကို ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့ တတိယအကြိမ် လွှတ်တော်များ စတင်ကျင်းပရန် ပြင်ဆင်နေဆဲ ကာလ မှာပင် အာဏာလောဘ ရမ္မက်ကြီးလွန်းလှတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တစ်စုက လက်နက်အားကိုးဖြင့် နိုင်ငံတော်၏အာဏာကို လုယူ၍ နိုင်ငံတော်ရဲ့အနာဂတ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရောင်ခြည်ထွန်းသစ်စ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရုဏ်ဦးဟာ အမှောင်ဖုံးခဲ့ရ ပြန်ပါတယ်။ တည်ငြိမ် အေးချမ်းပြီး ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့အခြေအနေအရပ်ရပ် ဟာလည်း ပျက်သုန်းခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထိုအခြေအနေဆိုးများကို လုံးဝလက်မခံနိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာ လူမျိုး ဘာသာမရွေး လူတန်းစားမရွေး အသက်အရွယ်မရွေး အာဏာရှင်စနစ်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြ တော်လှန် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတော်လှန်ခဲ့မှုများကို စစ်အာဏာရှင်နှင့် လက်ပါးစေများက လူသားစိတ်ကင်းမဲ့စွာ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများအပြင် ပြည်သူလူထု၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယက်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နေအိမ်နှင့်အဆောက်အအုံများအတွင်းသို့ ဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ကာ ကလေးသူငယ်များကိုပါမချန် သတ်ဖြတ်ခြင်း၊ အိမ်သူအိမ်သားများကို နှိပ်စက် ခြင်းများကို နေ့ညမရွေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ စစ်အာဏာရှင်များက လူသားမဆန်စွာ ပြုမူဆောင်ရွက်နေသော်လည်း နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လုံးရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် တွန့်ဆုတ် ကြောက်ရွံ့မှု မရှိဘဲ၊ သတ္တိရှိရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာ တော်လှန်ဖီဆန် ခဲ့ကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ ထိုကဲ့သို့အကြမ်းဖက် ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်များကို ပြည်သူများ အနေဖြင့် ကြေက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲ သတ္တိရှိရှိ ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ထို့အပြင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ဝန်ထမ်းများ၊ ပြည်သူများနှင့်အတူ နိုင်ငံတကာရောက် သွေးချင်းညီနောင်များကပါ ဟန်ချက်ညီညီဖြင့် အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု (Civil Disobedience Movement-CDM)ပြုလုပ်ခါ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား ရပ်တန့် ပျက်ပြားစေရန် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်ကို တော်လှန် ခဲ့ကြတဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ မကြုံစဖူး ခိုင်မာတောင့်တင်းလှတဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ပြသနိုင်ခဲ့ ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်အခါဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ဖြုတ်တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် အခွင့်အခါကောင်းလို့ ဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား ပြည်သူပြည်သားများအနေနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်စွာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျရှုံးဖို့ တော်လှန်နေတဲ့ အချိန်မှာ ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက်တင်မြှောက် ထားခဲ့တဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များကလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ (CRPH) ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်နေကြသူများ၊ အထွေထွေ သပိတ် အင်အားစုများ၊ အမျိုးသမီးနှင့် လူငယ်အသင်းအဖွဲ့များ၊ အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား အစုအဖွဲ့များနှင့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီတို့ဟာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပြီး ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီ ပဋိညာဉ်ကို အတည်ပြု ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီ ပဋိညာဉ်မှာ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်ရမည့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရာမှာ အခြေခံ ရမယ့် အခြေခံမူများ ပါဝင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပဋိညာဉ်အရ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (National Unity Consultative Council-NUCC) ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ထိုကောင်စီ၏ ညှိနှိုင်းကြီးကြပ်မှုဖြင့် ကြားကာလ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(National Unity Government-NUG) ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုကိုရရှိထားသော ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခံ နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ ထောက်ခံမှုရရှိထားသူများ၊ တိုင်းရင်း သား အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တတ်သိကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ အမျိုးသမီးများ လူငယ် များနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့အနေနှင့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ အပါအဝင် လုပ်ငန်း များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာမှာ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနှင့် တိုင်ပင် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီဟာ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးမှာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပါတယ်။
အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီနှင့်ပါတ်သက်၍လည်း ကောင်စီ၏ ကိုယ်စား မင်းကိုနိုင်က ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံတင်ပြပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား သွေးချင်းညီကိုမောင်နှမများခင်ဗျား….
အခုအချိန်ဟာ စစ်အာဏာရှင်နဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ လက်ပါးစေများက နည်းမျိုးစုံနဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက် အကြမ်းဖက်မှုများကို ဥပဒေမဲ့ဆောင်ရွက်နေသည့်အတွက် ပြည်သူများရဲ့ အသက်အိုးအိမ်များမှာ လုံခြုံမှုမရှိတော့ဘဲ ကျီးလန့်စာစား နေထိုင်ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရပါတယ်။ ဒီလို အခြေအနေဆိုး တွေကနေ လွန်မြောက်နိုင်စေဖို့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ပြည်သူ့ ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အစည်း များ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ပြုတ်ကျရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင်တို့၏ တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများကြောင့် နစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူများအတွက်လည်းကောင်း၊ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေးပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သဖြင့် အခက်အခဲများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော ဝန်ထမ်းများအတွက်လည်းကောင်း၊ စစ်အာဏာရှင်တို့မှ တိုင်းရင်းသား ကျေးရွာများကို လေယာဉ်ဖြင့် ဗုံးကျဲတိုက်ခိုက်၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရသော တိုင်းရင်းသားပြည်သူများအတွက်လည်းကောင်း အကူအညီများရရှိရန် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံအစိုးရများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တို့ကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေမယ့် လုပ်ငန်းများ၊ အရင်းအမြစ်များကို လျော့ပါး ချိနဲ့၊ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ပြည်သူများနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပြည်သူလူထုကို ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်၊ ဖမ်းဆီး၊ ညှင်းဆဲနေမှုများကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ စစ်ကောင်စီဝင်များနဲ့ လက်ပါးစေများကို ခြွင်းချက်မရှိ အရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရန်အတွက်လည်း နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးနှင့် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်သလို၊ ဆောင်ရွက်နေစဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု့ (CDM) ကို ဌာနဆိုင်ရာ အသီးသီးမှ ဝန်ထမ်းများက ဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ စစ်အာဏာရှင်တို့ အထိနာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လည်း အောင်ပွဲရသည်အထိ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်များ ပြုတ်ကျပြီး နိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားသစ်ကို CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဝန်ထမ်းများကို အခြေခံပြီး တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထု၏ အသက် အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကတိသစ္စာပြုထားသော်လည်း ကတိသစ္စာ ပြုထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာမှုမရှိဘဲ ပြည်သူများကို သတ်ဖြတ်၊ ညှဉ်းပန်း၊ နှိပ်စက်နေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် စစ်တပ်ကိုလည်း ပြည်သူများအပေါ် သစ္စာရှိသည့်သူများဖြင့် ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျရေးအတွက် လူငယ်များအပါအဝင် ပြည်သူပြည်သားအားလုံးက နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆန့်ကျင်ဆောင်ရွက်နေသလို ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအပေါ် အကူအညီပေးမည့်နိုင်ငံများ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာ နည်းမျိုးစုံဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးတင်ပြ ကတိပြုပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် ပြုတ်ကျမှသာလျှင် သွေးမြေ ကျ အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ သူရဲကောင်းတွေ၊ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကျေးဇူးဆပ်ရာ ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်အခါဟာ စစ်အာဏာရှင် အမြစ်ပြတ် ကွယ်ပျောက်စေဖို့ တိုက်ပွဲဝင်ရန် အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း ပြည်သူများနှင့်အတူ ညီညီညွတ်ညွတ် လက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်သလို ပြည်သူများအနေနှင့်လည်း စိတ်ဝမ်းကွဲမှုမရှိဘဲ၊ နိုင်ကိုနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ အောင်စိတ်ကို မွေးပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဆက်လက် တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားလိုပါ တယ်။
အောင်မြင်မှုရတဲ့အခါမှာလည်း ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနှင့် ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကို ကျေးဇူးပြန်ဆပ်သွားမှာဖြစ်ပြီး တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး လိုလားတောင့်တနေတဲ့ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအခါသမယမှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသစ် ကို တစ်ခဲနက် ထောက်ခံပြီး အစိုးရသစ်နှင့်အတူ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးကို အောင်ပွဲရသည်အထိ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါရန်နှင့် ပြည်သူအားလုံး လိုလားတဲ့ အောင်မြင်မှု ဟာ လက်တစ်ကမ်းအလိုသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ် အပ်ပါတယ်။
Like – 16K Share – 2253
Kyaw Thiha says:
2021-04-17 at 9:37 PM
Daw Khin Nyunt Win says:
2021-04-17 at 9:40 PM
Thwn Tan Zal says:
2021-04-17 at 9:41 PM
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ် 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
2021-04-17 at 9:42 PM
Athena G-xyz says:
2021-04-17 at 9:48 PM
We always stand with NUG till we getagreat success.
May Soe says:
2021-04-17 at 9:49 PM
နှစ်သစ်မှာ NUG အစိုးရအဖွဲ့အား လှိုက်က်လှဲစွာကြိုဆိုပါတယ်
နှုတ်ခွန်းဆက်မိန့်ခွန်း​ပြောကြား​ပေးပါ​သော ဒုသမ္မတကြီး ကျန်းမာပါ​စေ
Myat Myint Zu says:
Yin Yin Maw says:
2021-04-17 at 9:52 PM
Khin San Oo says:
Lin Saw says:
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမည္​။
ပြည်‌‌ထောင်‌စုဝန်‌ကြီးချုပ်‌ ကျန်းမာပါစေ။အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ်
Coral Coral says:
2021-04-17 at 9:57 PM
Sam Linn Mg says:
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမန်းဝင်းခိုင်သန်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ။အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်။
Thu Ya Phyo says:
2021-04-17 at 9:58 PM
Tr TayZar Linnaung says:
2021-04-17 at 10:16 PM
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကျန်းမာပါစေ ။သမ္မတ/အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်/ဒု-သမ္မတ/ဝန်ကြီးချုပ်/ဝန်ကြီးများ/CDMပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနှင့်ဆန္ဒပြတော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းများ ကျန်းမာချမ်းသာ၍ လိုရာပန်းတိုင်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိပါစေ။ရောက်ရှိမှာပါ။
2021-04-17 at 10:26 PM
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ပါေစ။အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ရမယ္ 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
U Yan Naing says:
2021-04-17 at 10:28 PM
စည်းလုံခြင်း ၊ ညီညွှတ်ခြင်း ၊ တိုင်းရင်းသား များနှင့် အတူ စာနာ နားလည် ကြခြင်း ၊ စစ်အာဏာရှင် တို့ရဲ့ နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ရက်စက်ခါသီးမှု့တွေကို သန်း၅၀ကျော်ပြည်သူများအားလုံး တညီတညွှတ်ထဲ ဆန်ကျင့်ကြခြင်း တို့ကြောင့် အရေးတော်ပုံ အောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ရဲရဲကြီး ပြောလိုက်ခြင်ပါတယ် ၊
Mary Thai says:
2021-04-17 at 10:32 PM
အဆုံးထိ CDM တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပါ
Mee Eain Shin says:
2021-04-17 at 10:35 PM
ပြည်‌‌ထောင်‌စုဝန်‌ကြီးချုပ်‌ ကျန်းမာပါစေ။အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ် 💪💪💪။
Thet Nwe says:
2021-04-17 at 10:41 PM
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္း အား ေထာက္ခံျကိုဆိုပါတယ္
Jacob Moe says:
2021-04-17 at 11:21 PM
ပြည်​ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ် မန်းဝင်ခိုင်သန်းဆိုတာ မန်းဘခိုင် ရဲ့ မြေး… ပညာတတ်မျိုးရိုး အာဇာနည်မျိုးရိုး ဖြစ်တယ်…..ကျနော်ကတော့ အကြွင်းမဲ့ယုံတယ်ဗျာ….
Øppã Zãw Lãy says:
2021-04-17 at 11:55 PM
Ohmmar OO says:
2021-04-17 at 11:59 PM
Onile Chitthu says:
2021-04-18 at 12:36 AM
We wants democracy we dont want dogs military
May May Ppk says:
2021-04-18 at 9:35 AM
Han Win Hlaing says:
2021-04-18 at 9:41 AM
အာဇာနည္ မန္းဘခိုင္၏ေျမး မန္းဝင္းခိုင္သန္း ေဘးကင္း က်န္းမာပါေစ။
Zinmarmar Kyaw says:
2021-04-18 at 9:56 AM
Susan Tin says:
2021-04-18 at 1:49 PM
Daw T Zin says:
2021-04-18 at 3:06 PM
#အင်းစိန်ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ကယ်ပေးကြပါဦးဗျာ…။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲဲ့တွေ
ကျနော် ကျော်ဇေ 14ရက်နေ့ နေ့လည် ၂နာရီ က ဆေးမှု ပြစ်မှုမထင်ရှားသဖြင့် ပြန်လွတ်လာပါသည်။
ထောင်တွင်းအခြေအနေအရမ်းဆိုးနေပါတယ်ဗျာ တချို့လူတွေ မသေသေးပဲ ဒဏ်ရာတွေကနေ လောက်တောင် ကျနေတယ်…၊
တချို့တွေ သေနတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ ပေါင်ပွင့် ခြေထောက်ပွင့်လျှက် ဒီတိုင်းပစ်ထားတယ် တချို့တွေ Feb လထဲက ဖမ်းထားတာ လက်ပြတ်လျှက် အဝတ်စပဲပတ်ပေးထားတယ် ။
မေးမေးပြီး ရိုက်နှက်နေတာ နေ့တိုင်း၊…သေခွင့်ပေးပါတော့လို့တောင် ဘေးခန်းက အစ်မတစ်ယောက်ရဲ့ တောင်းပန်သံအတိုင်းသား ကြားနေရတယ်။
ထမင်းလဲ ပုံမှန်မကျွေးဘူး တနေ့ ပေါင်မုန့်တစ်ခုနဲ့ ရေပဲတိုက်တယ် ။
ကျနော့ကိုလဲ နေ့တိုင်း ပေါင်မုန့်တစ်ခုကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်ပြီးပစ်ကျွေး​နေကျ ​အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်လို့ဖမ်းထားခြင်းခံရတွေဆို စဥ်းစားသာကြည့် ပေး​ကြပါ ။
ကျနော် မလွတ်လာခင် စကြ်ံတစ်လျှောက် ကလေးတွေ သစ္စာဆိုနေကြတယ် တခြားသူတွေ သူတို့လို အဖမ်းမခံကြရစေဖို့ ကျနော်ဗျာ မျက်ရည်မထိန်းနိုင်ဘူး ငိုကြွေးခဲ့ရတယ် သူတို့လေးတွေကို ကြည့်ပြီး။ တောင်ဥက္ကလာပ က အဖမ်းခံထားရတဲ့ ညီလေး ပြောပြချက်က feb ကထဲက ဖမ်းခံထားရတဲ့ နွေဦးသူရဲကောင်းလူငယ်တချို့ ရိုက်နှက်နှိပ်စက်ဒဏ်ကြောင့် သေဆုံးသွားပြီတဲ့ဗျာ
#ဘယ်သူမှမကယ်ရင် သေဖွယ်ရာပဲရှိတော့တယ် ….
PLEASE , PLEASE , PLEASE …. Do Something !!
(Please HELP those INJURED Detainees at Insein Prison
Min Khaing says:
2021-04-19 at 3:39 PM
အျမန္ဆံုး ေအာင္ျမင္ရပါလိုတယ္။ ရက္ေတြၾကာ႐ွည္လာတာနဲ႔အမွ် ေပးဆပ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာရၿပီဗ်ာ။
BBC ၏ Tales from the Street : The Man Behind the Camera ကို ခံစားတင်ပြသည်။…